Wasiirka Wasaarada Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska ayaa xilkii u kala wereejiyey agaasimihii hore ee wasaardaaas iyo agaasimaha cusub ee loo soo magcaaba. – SLMoTIT
Wasiirka Wasaarada Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska ayaa xilkii u kala wereejiyey agaasimihii hore ee wasaardaaas iyo agaasimaha cusub ee loo soo magcaaba.
Home Uncategorized Wasiirka Wasaarada Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska ayaa xilkii u kala wereejiyey agaasimihii hore ee wasaardaaas iyo agaasimaha cusub ee loo soo magcaaba.
Posted By: ahmed yusuf
(Hargeisa) 16 april, 2018, wasiirka wasaarada ganacsiga, dalxiiiska,iyo warshadaha ayaa xilkii u kala wereejiyey agaasimihii hore ee wasaardaaas mudane cabdirshiid axmed guuleed iyo agaasimaha cusub ee loo soo magcaabay mudane cismaan xuseen warsame.
xaflada xil wareejinta oo ka qbsoontay xarunta dhexe ee wasaarada ganacsiga, dalxiiska, iyo warshadaha ayaa waxa kasoo qayb galay marti sharaf aad u fara badan, waxaa isna xafladaasi goob joog u ahaa wasiirka wasaarada mudane, (maxamuud sacad saajin). labada mudane ee xilka la kala wareegay, agaasime waxeedada wasaarada, iyo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga, iyo marti sharafkale.
waxana goobtaas hadalo kala duwan kasoo jeediyey qaar kamida agaasimayaasha waxaha kala duwan ee wasaarada, gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga, waxa sidookale hadalka ku dheeraaday agaasimihii guud ee hore hadaladaas oo isugu jiray waxyaabahii u qabsoomay intuu joogay, caqbadadaha hortaagan wasaarda, hayaadaha ay wasaarada wada shaqaynta leeyihiin.
waxana uu halkaas ka xusay waxyaabihii u qabsoomay mudadii uu xilka hayey, waxaana ka mid ahaa sharciyada company-yada, sharciga kala hagista ganacsiga (commercial code), xeerka liisamada, xeerka warshadaha oo isna qabyo qoraal ah(drafting) waxa kale oo u qabsoomay xeerka ganacsatada yaryar (SME policy), iyo dib u habaynta tacriifadaha.
caqabadaha ka hor yimina waxa uu halkaas ka sheegay kuwa ugu waaweyni inay ahaayeen dhismo la’aan haysta wasaarada taas oo aan lahayn xafiisyo ama dhismayaal ku filan ilaa gobolada marka laga reebo gobolka togdheer oo isagu leh hal xafiis, sidookale wuxuu sheegay dayac tir la’aan haysata warshada kabka qaranka oo muhiimada weyn ugu fadhida qaranka. sidookale waxa uu sheegay haaydaha ay wada shaqaynta dhow leeyihiin, oo ay ka mid tahay(WHE company), rugta ganacsiga iyo wasaarda maaliyada.
Ugu dambayntii wuxuu fariin u diray wasaarada haruumarinta maaliyada isagoo ugu baaaqay inay ka taageerto una fududayso hawlaha shaqo ee wasaarada ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska jsl, waxana uu halkaas ku wareejiyey hanti isugu jirta 448 shaqaale ah kuwaas oo ka kooban ilaa gobolada, gadiid iyo dhamaan howlihii ka socday wasaarada, sidookale waxa halkaas shahaado sharaf ku gudoonsiiyey shaqaale weynaha wasaarada.
waxa isna halkaas hadlo kooban kasoo jeediyey agaasimaha cusub mudane( cismaan xussen warsame), hadalaas oo isugu jiray mahadnaq, sagootin iyo dardar gelinta sii wadida shaqada wasaarada, isagoo sidookale carabka ku adkeeyey in la helo abuurista jawi ganancsi.
Gabagabadii waxa hadalka soo afmeeray wasiirka W/ganacsiga, warshadaha, iyo dalxiiska oo soo jeediyey dhiiri gelin taabanaysa dhinacyo badan, sagootinta agaasimihii hore iyo soo dhowaynta agaasimaha cusub, isagoo sidoo kale ku nuux nuux saday muhiimada iyo ahmiyada ay wasaaradu qaranka u leedahay ugu dambayntiina waxa uu halkaas xilkii ugu kala wareejiyey labada agaasime.